Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ)
Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Encephalomalacia ဟာ ရောင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းတွေကြောင့် ဦးနှောက်တစ်ရှူး နေရာကွက်ပြီး ပျော့သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော့သွားခြင်းဟာ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု (သို့) ဒီထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ရှားပါးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာတော့ ဦးနှောက် ပျက်စီးခြင်းဟာ ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အရာတွေ အတော်များများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူဟာ ကိုယ်အင်္ဂါ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်နိုင်ပြီး frontal lobe, occipital lobe, parietal lobe နဲ့ temporal lobe တွေမှာလည်း တစ်ရှူးတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ထိခိုက်တဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို လုံးဝရပ်တန့်သွားခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေရော ကလေးတွေမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပြီး မိခင်ဝမ်းအတွင်းမှာရှိစဉ်တည်းက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို ဦးနှောက်ပျော့ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်လို့ သူ့ကို အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။
• Leukoencephalomalacia (the white matter ပျက်စီးခြင်း)
• Polioencephalomalacia (the gray matter ပျက်စီးခြင်း)
ဒီရောဂါဟာ အရောင်နဲ့ ပျက်စီးမှုအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
အဖြူရောင် ပျော့ခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Encephalomalacia(ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Encephalomalacia ဟာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ)ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Encephalomalacia ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
တခါတရံမှာ ဦးနှောက်အရွယ်အစား ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ pliability ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေက Encephalomalacia(ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
ရောဂါ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အမျိုးမျိုးဟာ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ တခါတရံ လေဖြတ်ခြင်း (သို့) ဦးနှောက် အတွင်းသွေးယိုစေတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက် ပျော့ခြင်း ဟာ သွေးပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ စုပြုံနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အချို့ အခြေအနေတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ဟာ သွေးလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းကြောင့် ပျော့သွားတတ်ပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှု အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းဟာ အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးစီးဆင်းခြင်းကို နှောင့်ယှက်တဲ့ ဦးနှောက် ပြင်းထန်စွာရောင်ခြင်း
ရောဂါပိုးဝင်နေတဲ့ ဦးနှောက်အကျိတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း
ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ဟာ astrocytes တွေပါတဲ့ အမာရွတ်တွေ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို အစားထိုးခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် သေသွားကြပါတယ်။ ဒီအမာ ရွတ်တစ်ရှူးဟာ ကျုံ့သွားပြီး ဦးနှောက်အတွင်းမှာ encephalomalacia ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Encephalomalacia(ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
သိပ္ပံပညာရှင် အတော်များများက ဒီအခြေအနေဟာ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ ဖြစ်ပွားတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တုံးတဲ့အရာ၊ ထိုးထွင်း ဝင်ရောက်စေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိခိုက်မိခြင်းဟာ ဦးနှောက်ပျော့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦးခေါင်းထိခိုက်မိခြင်းဟာ ခေါင်းကို မာကျောတဲ့ အရာတစ်ခုခုနဲ့ ရိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ထိုးထွင်းတဲ့ ဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိုးမိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုပါတယ်။ ဦးနှောက်တစ်ရှူးတွေဟာ ခွဲစိတ်နေစဉ် ဒဏ်ရာကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ)ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
ဆရာဝန်တွေက Encephalomalacia ကို အဖြေရှာဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က သင့်မှာ ဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်ဆိုရင် ပထမအချက်က သင့်ကိုယ်ခန္ဓါကို စစ်ဆေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ရောဂါရှာဖွေဖို့ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
MRI ဟာ ဦးနှောက်ပျော့ခြင်း လက္ခဏာတွေကို သိရှိဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးနဲ့ အများဆုံးအသုံးပြုကြတဲ့စစ်ဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။
CT scan ဦးနှောက်ကို ရိုက်ခြင်းကလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
Encephalomalacia (ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ပျက်စီးနေတဲ့ ဦးနှောက်တစ်ရှူးတွေကို ပြန်အလုပ်လုပ်အောင် လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဒီရောဂါကို ကုသဖို့ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ သုတေသီတွေက ပျက်စီးနေတဲ့ ဦးနှောက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှုတွေမှာတော့ ဦးနှောက်ပျော့စေတဲ့ အချက်တွေကို သေချာကုသခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပျက်စီးနေတဲ့ ဦးနှောက်ကို ခွဲစိတ်မှုနဲ့ ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ရဲ့ မာကျောမှုဟာ ပျော့နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့် ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်အပြီး အာရုံခံစားမှုတွေ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မသေချာပါဘူး။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဒီရောဂါကိုကုသဖို့အတွက် stem cell therapy ရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေကို ရှာဖွေစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Encephalomalacia(ဦးနှောက်တစ်ရှူးပျော့ရောဂါ) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
ဒီရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းကို ဒဏ်ရာမရအောင်သာ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း၊ ဗီတာမင် အီးပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားခြင်းဟာ ဒီလို ဦးနှောက်ပျက်စီးမှု အမျိုးအစားဖြစ်နှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Encephalomalacia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_softening. Accessed2Mar, 2017.